Indawo ekhethekileyo yeAlpic kwintliziyo yeDavos
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIvana
Iiholide kwiiAlps zibumba abantu. Umhlaba weentaba unomdla, ngoko yiva amandla endalo ngendlela ekhethekileyo, ukudibanisa umtsalane, ubutyebi besithethe kunye noyilo lwezobugcisa bezizwe ngezizwe ngokuhlala kule ndlu intle. Fumanisa iiDavos kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho kumgangatho ophakamileyo, uhlaziywe ngokupheleleyo, kunye neflair yoyilo olukhethekileyo kunye nombindi, iDavos Platz ekwindawo yokuhlala enebalcony.
Uninzi lweendawo zokutyibiliza emkhenkceni, iivenkile, isikolo sabantwana sokutyibiliza, iindawo zokutyela, iibhari, iindawo zokubhaka kunye nendawo yokutyibiliza yendalo yomkhenkce kunye ne-skating rink zikumgama wokuhamba. Isikhululo sikaloliwe saseDavos-Platz kukuhamba imizuzu emihlanu kuphela, indawo yokumisa ibhasi ilungile phambi kwesakhiwo.
Indawo yokuhlala ilungele izibini okanye iintsapho ezincinci. Inika igumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, ikhitshi elinendawo yokutyela kwakunye negaraji. I-elevator ibonelelwe ukusuka kwinqanaba legaraji.
Ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo kwaye ihlaziywe ngokupheleleyo enefriji entsha, ifriji, i-dishwasher, i-oven, ipleyiti ene-ceramic hob, i-granite counter-tops, i-top steel stainless, izitya ezaneleyo, i-cutlery, zonke iintlobo zeeglasi, iketile yombane, i-Nespresso maker, i-toaster, i-fondue. iseti, iadaptha yamandla yezixhobo zaseJamani, njl.
Itafile yokutyela enesitayile ebandakanya izitulo ezikhethekileyo ezenzelwe abantu aba-5 iphambi kwekhitshi kwindawo yokuhlala. Igumbi lokulala lixhotyiswe ngebhedi (160x200 cm) kunye ne-closet. Ibhedi enkulu yesibini (200x210 cm) ifumaneka kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokuhlala, igumbi lokulala kunye nendawo yekhitshi kunye nomgangatho womthi wendalo. Igumbi lokuhlambela langoku linendlu yangasese, ishawa kunye nomgangatho ogqwesileyo wegranite.
Ilinen yebhedi, iitawuli zasekhitshini, iitawuli zelaphu terry, isomisi seenwele, isicoci sevacuum, iphepha lendlu yangasese, izipontshi, izinto zokuhlamba izitya ziyafumaneka.
Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga. Le yindlu engatshaywayo.
Zonke iindwendwe zethu zinokusebenzisa ezi ncedo zilandelayo simahla: indawo yokupaka yangaphakathi kwigaraji, igumbi lokutyibiliza ekhephini, indawo yokuqubha yangaphakathi yabucala.
Ezi nkonzo zilandelayo zixhomekeke kwiindleko ezongezelelweyo ukuba zisetyenziswe ngexesha lokuhlala: Igumbi lokuhlambela (imali esetyenziswayo) kunye neSauna (7CHF ngomntu ngamnye)
Uya kufumana izitshixo kumnakekeli wethu uMnu. Kostic ekufikeni kwakho. Uya kukwamkela ngokufudumeleyo yaye uya kukuvuyela ukukunceda ukuba unemibuzo okanye iingxaki.
Ukuba unaso nasiphi na isicelo esikhethekileyo, nceda usazise nge-imeyile kwaye siya konwaba ngakumbi ukuyilungiselela ngaphambi kokufika kwakho.
Inombolo yomthetho: 14582
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Davos Platz